Garaad C/llahi Cali Ciid, afhayeenka Issimada Puntland oo ugu baaqay M/weyne Shariif in R/wasaaraha cusub uu ka yimaado Puntland. – Radio Daljir
Garaad C/llahi Cali Ciid, afhayeenka Issimada Puntland oo ugu baaqay M/weyne Shariif in R/wasaaraha cusub uu ka yimaado Puntland.
Oktoobar 9, 2010 12:00 b 0
Garowe, Oct 09 – Garaad C/llahi Cali Ciid ayaa shir jaraa’id kaga hadlay magacaabidda R/wasaaraha cusub, nidaamka federaalka ah iyo dhismaha dawlada goboleedyada, amniga, burcad badeeda, tahriibka iyo arrimo kale oo saameeya Somaliya. Garaad C/llahi waxaa uu ku baaqay …
Wasiirka waxbarashada Puntland oo la dardaarmay 63 arday oo waxbarasho ugu ambabaxaya dalka Ethiopia.
Issimo & Nabadoono ka kala socda gobollada Sanaag & Karkaar oo shir ku saabsan 2 qof oo dhawaan lagu dilay Dhahar ku yeeshay Qardho.